I-roulette yengxoxo yezocansi
I-roulette yengxoxo yezocansi yithuba lokujabulela ubulili obubonakalayo mahhala usebenzisa i-roulette yengxoxo yevidiyo. Ngeke kube nzima kuwe ukuthola intombazane noma umfana ocansini phambi kwekhamera yewebhu edolobheni lakho. Konke okudingekayo ukukhombisa ubulili bakho bese uqhafaza ku- "Start Search". Ngemuva kwalokho i-roulette yezocansi uqobo izoqala ukunikela ngokuzikhethela komlingani ongaba naye ocansini. Kwabafana, i-roulette yengxoxo yezocansi izonikeza ukukhethwa okukhulu kwamantombazane engxoxweni yezocansi, futhi amantombazane afaka abalingani babo bezocansi phakathi kwabafana futhi ajabulele le ngxoxo ethokozisayo.
I-roulette yaseRussia: ukuphola okungajwayelekile online
Yethulwe ngoNovemba 2009, iChatroulette.com yadubula ubusuku obubodwa - ezinyangeni ezintathu nje kamuva, izincwadi ezimbili ezinegunya zabhala ngayo: I-New York Times neNew York Magazine. Indaba eyatshelwa izintatheli yayikhumbuza kakhulu ukufezeka kwephupho langempela laseMelika, ngakho-ke yathandana nomfundi waseNtshonalanga futhi yalandiswa ngokushesha ngabezindaba baseRussia.
Indaba imi kanjena: umfana oneminyaka engu-17 ubudala waseMoscow u-Andrey Ternovsky, njengamakhulu ezinye izingane, wenza iwebhusayithi ukuxhumana nabangane bakhe. Ingqikithi yalo mbono bekungafanele kukhethwe ozongenela phakathi kwakhe, njengoba kwenziwa kunoma yiluphi uhlobo lokuxhumana esaziwa yithi, kepha "ukumshaya" ngengozi - ngokombono womdali wephrojekthi, kumnandi kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, leli sayithi, ekuqaleni lalisetshenziswa iqembu elincane kuphela labantu, laqala ukuthandwa. Izwi lomlomo lisebenze kangcono kunanoma yisiphi isikhangiso. Okuthakazelisa ikakhulukazi futhi okungajwayelekile: iphrojekthi ithole udumo lwayo lokuqala kude nalapho iqale khona - hhayi eRussia, kodwa emazweni akhuluma isiNgisi. Ensimini ye-CIS, insiza ayizange iwele emkhakheni wokubuka izilaleli eziningi kuze kube umzuzu lapho abezindaba baseNtshonalanga babhala ngakho.
Ngakho-ke, ngokuthayipha igama lesizinda elidumile manje kubha yekheli, umsebenzisi uyiswa ekhasini elinesixhumi esibonakalayo esilula. Kwisizinda esimhlophe mpunga, kunamawindi amabili, ngalinye lawo lizoqukatha isithombe esidluliswa sisuka kwikhamera yewebhu. Ngakwesobunxele kungumxhumanisi wakho, ngakwesokudla nguwe. Vele, ukuze insizakalo isebenze, udinga ukuthi ube nombhobho, ikhamera nokuxhumeka kwe-Intanethi okuzinzile.
Ngokuchofoza inkinobho ethi "Umdlalo Omusha", uzobona okhulumisana naye futhi uxoxe naye kancane, noma chofoza u- "Okulandelayo" bese uthola umuntu ongcono. Kodwa-ke, noma ngabe ujabulile futhi ungathanda ukuxoxa ngalokhu nalokhuya, ingxoxo ingama, ngoba umuntu "ongaphesheya kwe-Intanethi" unelungelo lokukhetha.
Ukuphendula kwensizakalo elula kangaka, uma kungenjalo kwakudala kwakucace bha.
Imithombo yezindaba eminingana yaseRussia nababhlogi abangabodwana bagxeke iCahtroulette.com "njengendawo yabaphambuki." Lesi akusona isinqumo esingenasisekelo. Bheka nje isithombe-skrini esingenhla ukuze ubone ukuthi awuboni nje kuphela ubuso obujabule, obujabulile, kodwa nokuthile okungajwayelekile. Futhi kuhle uma kuyimvunulo yomkhosi noma ithoyizi elinsomi elithambile. Iqiniso ngukuthi izivakashi ezinganakekeli besiza, zisebenzisa ukungaziwa kwazo, zivame ukwephula imithetho eyisisekelo ebhalwe ekhasini eliyinhloko: "16+ noNude Nudity".
Futhi "phesheya", kunalokho, "kudla nokudumisa". Ngokuya ngohlaziyo lwethrafikhi yewebhusayithi enikezwe ngumthombo weTechcrunch, abasebenzisi abangu-47% bangabaseMelika, balandelwa abaseFrance nge-15%, nabaseCanada endaweni yesithathu (ngaphansi kuka-10%). Futhi lokhu, kukonke, kuchazeka kalula - abamele la mazwe baqala kalula ingxoxo nomuntu ohamba naye endizeni, umakhelwane endaweni yokudlela, futhi ngokuvamile bavulekele abantu obajwayele kanye nezingxoxo - ngokungafani nabantu bakithi.
Inani eliphelele lesayithi selivele lingabantu abangaphezu kwezigidi ezine ngenyanga, kanti ithrafikhi yansuku zonke ilinganiswa ngamakhulu ezinkulungwane. Uma usuqagele ukuthi bangaki abantu abaku-inthanethi njalo ngomzuzwana, kunzima kakhulu ukuthola umuntu odumile, umuntu okade ufuna ukuxhumana naye. Kepha mhlawumbe. Osaziwayo abaningi bayavuma ukuthi kwesinye isikhathi bavakashela isiza futhi bachitha isikhathi esanele lapho.
Kodwa-ke, kwesinye isikhathi kwenzeka okuphambene: abanye abantu abake bangaziwa bakwazi ukuphatha ukuthandwa komhlaba wonke. Njengesibonelo, umculi-owenza ngcono umculi uMerton, owathola izinkulungwane zabalaleli ababongayo ngobukhulu benethiwekhi.
Ngokungafani ne-Chatroulette, ehlose umsebenzisi wangaphandle, iphrojekthi ye-davaipogovorim.ru iphakanyiswa kuphela eRunet. Ngeke sichaze ukusebenza, ngoba iyiphinda ngokuphelele insiza esivele ichaziwe, kepha qaphela ukuthi abathuthukisi bangeze imininingwane eyodwa ebaluleke kakhulu: isicelo esikhethekile se-VKontakte, esizokuvumela ukuthi uqhube izingxoxo ngaphandle kokushiya "ikhaya" lakho.
Ukubuyela emuva okuyisisekelo kwesisetshenziswa nohlelo lokusebenza (futhi kusebenza ngokuvumelanayo) inombolo encane yabasebenzisi. Ngesikhathi sokuhlolwa, vele ngokuchofoza kwesihlanu noma kwesithupha bengifuna ukubabaza: "Bah! Bonke ubuso obujwayelekile!"
Muva nje, njengoba kukhumbula umfundi wethu oqaphelayo, enye yezinjini ezinkulu zokusesha nezingosi ezinemisebenzi eminingi - iMail.Ru - ivule i-analogue yayo yengxoxo yevidiyo edumile. Kuyathakazelisa ukuthi uma ungalihloli ibhokisi lokuhlola elithi "Sesha kuphela ngekhamera yewebhu" ngesikhathi, umlamuleli ngeke aseshwe kuphela kulabo abasebenzisa le nsizakalo njengamanje, kodwa phakathi kwabo bonke, bonke, abasebenzisi beMail.Ru (labo lapho izigidi eziningi), kepha Lokhu kusho ukuthi kuzokwazi ukubuka izithombe ze-avatar ezinganyakazi isikhathi eside. Ngaphandle kwalokho, ngeke ubone mehluko ekusebenzeni.
Le ngxoxo engahleliwe inikeza izinketho ezimbili ongakhetha kuzo: umbhalo nevidiyo. Isayithi lisebenza ngokushesha ngokwanele, kunabasebenzisi abaningi online. Ngaphandle kokutholakala kokuxhumana ngombhalo, bekungekho omunye umehluko ovela kuChatroulette.
I-Flytok.ru inguqulo eyinkimbinkimbi futhi enemibala yengxoxo efanayo yevidiyo. Uma ufaka isiza, ngokushesha ubona amafomu amabili - elilodwa lokungena ngemvume okulula, elinye ukubhaliswa. Kodwa-ke, ngesikhathi sokuhlolwa, ukubhaliswa bekungafuni ukusebenza nganoma iyiphi indlela, njengoba kwenza nengxenye yezixhumanisi zesixhumi esibonakalayo. Ngakho-ke bekufanele sibheke kuphela uhlobo "olulula" lwensizakalo futhi sigxile emibonweni yozakwethu.
Into yokuqala ebamba iso lakho: insiza ayiyona elula njengoba ibonakala. Akuyona isikhombimsebenzisi esicacile ngokugqwayiza, ukubhaliswa kuyadingeka. Hhayi nje abantu ongabazi ababuthana lapha, abafuna ukushintshana ngamagama ambalwa, kepha nabantu abanesifiso esikhulu sokuxhumana. Ungagcwalisa iphrofayili yakho, wenze abangane, ubuke ukusakazwa, ama-albhamu wezithombe, ufunde futhi ubhuloge. Inani labasebenzisi besayithi liphansi impela kuneChatroulette, kepha kwesinye isikhathi lingadlula enye insizakalo yaseRussia. Le sevisi isondele kakhulu kunethiwekhi yokuxhumana nabantu kune-prototype yayo.
Kungashiwo okufanayo ngeTinyChat Next - ngombono wokuthi ingumthombo wamazwe angaphandle, futhi imiphakathi, kanye nabasebenzisi bayo, bangabokufika ikakhulukazi - lena yingxoxo yevidiyo yomphakathi. Abantu abeza kuleli sayithi hhayi umzuzu, kodwa ukuxhumana okugcwele. Ngena, ukhethe umphakathi bese uqala ukuxoxa ngesihloko. Uma ufuna, ungabhalisa futhi wakhe umphakathi wakho bese ulinda abanye ukuthi bakujoyine. Ungenza ngaphandle kokubhalisa ngokungena ngemvume nge-akhawunti yakho ye-Facebook noma ye-Twitter.
I-roulette yengxoxo yevidiyo - isevisi elula yokuphola online
Noma ngubani olwela ubuhlobo obusha, ofuna ukukhuluma ngezihloko ezithokozisayo, enze abangane, ahlangane namantombazane, kufanele azame indlela elula futhi elula yokuphola online - i-chat roulette. Lo mthombo okhethekile uvula ukufinyelela ezigidini zabasebenzisi be-Intanethi, njengoba nje unentshisekelo yokuxhumana okuthakazelisayo, uthando nobungani. Ukukhethwa kwe-interlocutor kwenzeka ngokuzenzekelayo, kungaba ngumuntu ovela eRussia, eBelarus, eJalimane, e-United States ngisho nase-Australia.
Ukuxoxa ngevidiyo namantombazane kuvumela abafana ukuthi basebenzise amakhono abo okuxhumana nabobulili obuhlukile futhi benze izintombi emhlabeni wonke. Kunethuba elihle lokuthi phakathi kwalaba bantu abakhuluma ngokungajwayelekile kukhona imimoya yezihlobo. Ingxoxo yeRoulette namantombazane ingumsizi onokwethenjelwa ekutholeni umphefumulo womlingani wakho!
Noma ngubani onekhompyutha yakhe enekhamera yevidiyo, imakrofoni nezipikha angakwazi ukufinyelela ekuxhumaneni nge-inthanethi ngaphandle kwemingcele. Ngemuva kwakho konke, yile nto eyenza sikwazi ukusakaza isithombe sevidiyo futhi siqhube ingxoxo.
Akudingekile ukufaka igama, kepha ingxoxo yevidiyo inikeza abasebenzisi ababhalisiwe izinketho eziningi kunezingaziwa. Ukuze uzethule ngokukhanya kwakho okuhle, kunconywa ukuthi urekhode ividiyo emfishane yokwamukela
Ngokuchofoza inkinobho "Qala Usesho", ngokuzenzakalela uba yilungu lohlelo. Isithombe salowo ongahle akhulume naye sivela ewindini lezingxoxo zevidiyo: uyambona futhi umuzwe umuntu, uyakubona futhi akuzwe. Uma ubuntu be-interlocutor bubukeka bungathandeki noma bungathandeki, cindezela inkinobho "Okulandelayo" bese uya kumuntu omusha.
Ziyini izinzuzo ze-roulette yengxoxo yevidiyo
Okokuqala, ingxoxo yevidiyo iyithuluzi lokuthola abantu obajwayele ukuxhumana okulula nokulula. Izinhloso zokusebenzisa isevisi yethu kumuntu ngamunye othile zingahluka.
Insizakalo yethu eku-inthanethi inika amandla abasebenzisi ukuxazulula izinkinga eziningi zomuntu siqu:
Ukunqoba izakhiwo. Amahloni nokuntuleka kwamakhono okuxhumana kwenza impilo ibe nzima kakhulu. Ingxoxo yethu yevidiyo isiza ukuzethemba, ifunde ukungena engxoxweni kalula, igcine ingxoxo nabantu ongabazi futhi idlala ngothando. Ukuqwashisa ngokungaziwa, ukuhlukaniswa ne-interlocutor ngesikrini sokuqapha, kanye nokukwazi ukuphazamisa ingxoxo nganoma yisiphi isikhathi kunikeza umuzwa wokuvikeleka futhi kukuvumela ukuthi uzizwe ukhululekile futhi ukhululekile.
Ukuthola i-pair. Ingxoxo yeRoulette namantombazane ikunikeza ithuba lokusungula ukungabizi ngegama, ubudlelwano obumnandi obuku-inthanethi, obukhula babo buzoxhomeka kuwe kuphela. Mhlawumbe nizothandana kakhulu kangangokuba ninqume ukuxoxa ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Kwabaningi, ingxoxo yethu yevidiyo isiphenduke indawo yokuhlangana enothando lweqiniso.
Ukwesekwa ngokwengqondo. Esikhathini esinzima, lapho kungekho othandekayo eduze, akulula ukubhekana nezinkinga eziqoqeke wedwa. Ezimweni ezinjalo, ngisho nomuntu ongamazi angawuthulula umphefumulo wakhe, futhi ukusekelwa kokuziphatha kanye nezeluleko ezinhle ezivela kumuntu ongamazi kungaba wusizo olukhulu.
Ungabathola kanjani abangane abasha ku-roulette yengxoxo
Kulula ukuhlangana, ukuba nezingxoxo, ukuqala ubudlelwano engxoxweni yevidiyo. Ungaphatheki kabi lapho okhulumayo ephazamisa ingxoxo kuqala: akunakwenzeka ukujabulisa wonke umuntu ngokuphelele. Ingxoxo yethu yevidiyo namantombazane ikunika ithuba lokuxhumana nezinkulungwane zabantu. Zama ukubukeka unobungane, ucocekile, unomusa, uhlakaniphile, unake lowo okhulumisana naye, futhi nakanjani uzohlangana nomuntu okuthanda ngobuqotho.
Yiba nobungane, unganqikazi ukuba owokuqala ukuxhumana - futhi abantu abasha abathandekayo nabasebenzisekayo bazovela empilweni yakho!
Ingxoxo Yevidiyo RF © 2018
Ingxoxo yevidiyo edume kakhulu yaseRussia!
Ngabe ufuna ukuzwa okukhanyayo nenjabulo kusuka ekuqomeni? Sijabule ngokumangalisayo ngokunikeza ingxoxo yevidiyo yakamuva, efaneleke kakhulu - efanelekile, ehloselwe ngqo ukuthola abantu abanomqondo ofanayo nokuchitha isikhathi kwi-Intanethi. Uchwepheshe wethu ongaphakathi endlini ubhale idizayini ethokozisayo: ine-interface elula, esebenzayo. Ukukhululeka kwabaphathi - kuzokuvumela ukuthi uchithe isikhathi ngokuthokozisayo ethekwini elingabonakali nabangane bakho noma nabantu obaziyo abasha.
Njalo ngonyaka, ukuthandwa kwemithombo kuyanda ngenxa yokuhlinzekwa kwamathuluzi wokuxhumana. Vumelana - kulula, impela, kufinyeleleke ngokuphelele ukuthi uziphathe kahle kuwo wonke umuntu, ube sezingxenyeni ezihlukene zomhlaba, ngaphandle kokuvuka emsebenzini (ikhompyutha) noma i-laptop. Kumele kuqashelwe ukuthi izimali ezinkulu zezezimali azidingeki. Njengomthetho, kuthathwa inkokhelo yokusebenzisa ukuhlinzekwa kwezinsizakalo zokuxhumana, insizakalo yokuxoxa ngevidiyo. Imali encane yokusebenzisa imali ayinakuqhathaniswa nohambo lokuya kuphela yitekisi.
Inkampani yethu isivele idale uhlelo lwe-VKontakte lapho abantu abaningi beza khona bezokuxoxa. Ingabe kuhle ngempela ukuthola abangane bezingxoxo ngokucindezela ukhiye webhere? Kwaba lula ukubheka isathelayithi. Inqubo yenziwe lula kakhulu - ukuze uthole umlingani womphefumulo ngaphandle kokuphuma egumbini lakho, ungaqhubeka ngosizo lwenkonzo ekhethekile. Yonke "inqubo" ingenziwa ngokusebenzisa ama-ejensi emishado alolu hlobo, futhi ngqo - ngokuyifaka. Nsuku zonke, abasebenzisi bewebhu ebanzi yomhlaba bathola ukufinyeleleka ukubuka izingxoxo eziningi, kepha abakwazi ukuziqhayisa ngezithameli eziningi noma izinto ezisungulwe ngobuchwepheshe. Le ngxoxo yevidiyo, nebhulogi elula yokuxhumana, nezinye izingxoxo ezinemixholo.
Kusho ukuthini ukuxoxa ngevidiyo nomngane ongathandani naye? Ngeke uhlangane nabantu abadlulayo kuphela, kodwa nabantu bakho abanomqondo ofanayo. Futhi, izinsizakalo ezinjalo zinikezwa yi-thematic: ingxoxo yabashayeli bezimoto, egxile ezihlokweni zentsha, inkundla yabantu abadala, isizukulwane esiphakathi, nabanye.
Ukujwayelana okuhle engxoxweni yevidiyo yaseRussia!
Uzwile i-100% imishwana ethi: "Bahlangana ku-videochate futhi bashada ngemuva konyaka", noma isibonelo: "umngane wakhe omkhulu wahlangana naye". Izinhlangano eziningi ezinobungane, zothando ziphinde zakhiwa kusetshenziswa iWorld Wide Web, yize abantu abaningi, bezamile ukuqala ubudlelwano ngale ndlela futhi ngasikhathi sinye, behlulekile, balahla lo msebenzi kuze kube phakade. Lapho-ke ziqala kuphi izikhathi ezinengqondo, eziphumelela kakhulu ezingxoxweni zevidiyo?
Ngaphambi kokuba uqale, ufuna ukukusho, okubaluleke kakhulu ngabantu abaphikelelayo, ngoba kunabantu abaningi abenza abantu abajwayelene nabo nge-chat roulette - banamahloni, kwesinye isikhathi ngisho nokungazethembi okuncane, kungenzeka ukuthi abanazo izifiso ezinkulu. Uma usucabangisise kahle, kubalulekile ukuya kulesi sinyathelo, kepha-ke khumbula ukuthi kusuka okokuqala usho isitatimende sakho - uzofakwa kumamaki abhalwe ohlwini. Bangaki abantu - imibono eminingi kangaka, izifiso ... Ngemuva kwakho konke, kukhona umuntu ofuna ukuhlangana nabantu abangahlukile kangaka? Ngakho-ke ungalilahli ithemba ngokushesha.
Kulula kakhulu ukwephula le nkolelo. Ngemuva kokudlula ezigabeni ezithile, noma yikuphi ukuxhumana kusondela ekuxoxeni ngomhlangano wabahlanganyeli bawo. Uma kukhulunywa ngalokho, isinyathelo sokuqala kufanele sivele kuwe. Usebenzisa lokhu kuhamba - khombisa ukuzimisela, ukubekezela.
Kubalulekile ukwazi okujwayelekile: Khohlwa ngokusebenzisa imishwana ye-formulaic. Kuliqiniso, okuhlukile kungafaka lawo macala lapho okhulumayo enquma ukuwasebenzisa kuqala. Akubuhlungu ukwenza ngamunye wemiyalezo yakho ahluke futhi ajabulise lapho uxhumana.
Cabanga nje okuncane, umuntu angaze athi - ziqagele wena esikhundleni salowo okubonayo. Akunasidingo sokuqala izibalo "ezingenalutho" futhi uvele unqunu eduze kwekhamera! Kuyadingeka ukusondela embuzweni ngesizotha, ngokuqonda. Zama ukwenza imicabango ngokucabangisisa, bhala ngokufanele. Ngemuva kwakho konke, lokhu kungakhuphula kakhulu intshisekelo kuwe.
Ukucabanga kahle - ukuhlanganisa okuyinhloko kwanoma yiluphi uhlelo lokusebenza olufana nalokhu:
- Ubuqotho. Zama ukuthembeka ngangokunokwenzeka. Uma wenza i-aphoyintimenti, umngane wakho angadumala uma ukopela. Kulokhu, imizamo izoba yize ...
Abantu abathole ukuphoxeka okukhulu - bambalwa kubo, kepha bahlangana empilweni yansuku zonke. Imvamisa izimpikiswano ezethulwe yilaba bantu yilezi: "kwi-Intanethi, ubekhuluma ngokungafani nami ...". Uma ungafuni ukuthi i-verbiage enjalo ikukhathaze - thembeka, mhlawumbe ube nesizotha esincane, empeleni akufanele wephule imithetho yengxoxo yevidiyo yaseRussia Videoruletka.in.ua!
Yenza izipho ezinhle ngokuthenga izinhlamvu zemali.
Ingabe usukulungele ukuzama izipho? Lokhu kusho ukuthi uthole isihloko esifanelekile seholide elihlanganyelwe futhi kufanele uthenge isikweletu sangaphakathi usebenzisa uhlelo olunikezwe yiBadanga Ltd. Uma udinga izeluleko - i-roulette yengxoxo yevidiyo yaseRussia "iVideoruletka" yeluleka ukukhuphula ibhalansi yakho ngeWebMoney, iQiwi, imali yeYandex, nanoma iliphi ikhadi leBhange. Ngaphezulu, kunezinketho ezinhle ngokuhlelekile, ngoba izinhlamvu zemali eziyi-10 (izinsuku ezingama-20 zokuxhumana, uma ngasikhathi sinye uzama ukunganikeli izipho ngokusuka enhliziyweni) usebenzisa amasistimu we-elektroniki angenhla - $ 10. Lezi izindlela eziphephe kunazo zonke, ezinenzuzo enkulu, ezenziwe lula, okungeke kuphakame mibuzo kuzo.
Ukukhokha nge-SMS, ukuthumela kuya kwinombolo ejwayelekile emfushane. Akusizi ngalutho ukugcwalisa ibhalansi yangaphakathi kulesi sigaba. Lezi zemali ezi-4 kuphela zalowo obhalisile. Futhi kuya ngesisebenzisi. Ku- $ 10, kungaba nezinhlamvu zemali eziyishumi, ezigcwaliswa ngekhadi lasebhange. Iningi labo likhokha kanjalo ngenxa yejubane nakuselula i-akhawunti ivame ukugcwaliswa kabusha. U "Videoruletka" udwebe ukufanisa, esenqume ukuthi ukukhokha ngenombolo emfushane, ukuthumela i-SMS akusizi ngalutho, ngemuva kokuthumela umlayezo omfishane - uhhafu wemali - kususwa opharetha wezokuxhumana. Nayi inkinga yangempela yokugcwaliswa kwemali evezwe ku-4, hhayi ama-kopecks ayishumi wokusetshenziswa kwemali okujulile. Ukuze kube lula kakhulu.
Yaqala kanjani ingxoxo yevidiyo?
Kusukela esikhathini lapho kuzalwa i-Intanethi, siphinde futhi siqhubekele phambili ngokushesha phambili ekuqhubekeni kwesayensi nobuchwepheshe emkhakheni wezokuxhumana ngobuchwepheshe obusha bekhompyutha. Abaningi bazamile ukusungula lolu hlobo lwezingxoxo oluzosiza ukuhambelana online, okungcono kakhulu ukubonana. Sicela wazi ukuthi konke kwenzeka ngesikhathi sangempela. Ngokwemvelo, ngokokuqala ngqá, intuthuko yavela nohulumeni, isoftware enjalo yayingalingani, yahlukaniswa; zazisetshenziswa ezivivinyweni ezahlukahlukene nasekusebenzeni kwezempi kombuso. izinga. Eyokuqala "enobungane" yazalwa emuva ngo-1988, yabizwa nge- "Internet Relay Chat". Vele, insumansumane enjalo emkhakheni: i- "World Movement" ngokushesha yaduma. Le ntambo entsha isebenze njengesisekelo sokwakha amakamelo okuxoxa online.Yakha ikakhulukazi isisekelo sokwakhiwa kwengxoxo yevidiyo. Ngemuva kokuthuthuka, ukuthuthuka nezithuthukisi zezinsizakusebenza ezibhalwe ngonjiniyela bezobuchwepheshe, noma yisiphi isivakashi sesoftware yakamuva singavele sixhumane kuzo zonke izinhlobo zezingxoxo ngaphandle komzamo.
Ngesikhathi sokuthuthukiswa kwale software, izinhlobo zamanje zisunguliwe. Ngenxa yesidingo sesithombe "bukhoma", kube nesidingo sokusungulwa kwensiza engajwayelekile - ikhamera yewebhu. Ngokokuqala ngqa, le gajethi, noma ungaqhathanisa "idivayisi", yayineminyaka emithathu ngemuva kokuvela kwezinhlelo, okungukuthi, ngo-1991 (kulezi zinsuku, cishe yonke imishini yokucabanga ifakwe ngalokhu). Okusha kuvumele wonke umuntu ofuna ukudala ukusakaza namuhla futhi axhumane nalabo bantu abazingelayo noma, kunalokho, afune abantu abangaziwa ngaphandle kokushiya ikhaya. Simemezela ngesibindi ukuthi abasebenzisi bezingxoxo zevidiyo bayabonga ngale ndlela encane njengekhamera yewebhu. Ake sabelane ngayo nekhamera yewebhu - ngiyabonga!
Uma ucabanga ngakho, ingxoxo yevidiyo engakahleleki ingumholi phakathi kwamaphoyinti wokushintshana ngolwazi ngokuthumela amagama. Ungacabanga ngomuntu, umuzwe enekhono lokubhala, ukukhuluma, ukuzizwa - ehleli ekhaya. Manje ake sibheke izinzuzo ngokulandelana kwazo. Isithunzi esibonakalayo ukubona! Ungacabanga ngomphikisi wakho. Uma usezingxoxweni ezijwayelekile noma ezindaweni ezifanayo ezidumile zokuphola, uma unenhlanhla - uyajabula ukubona isithombe (noma isithombe, asikhishiwe) - uyabona lapha futhi uqinisekile ukuthi uhumusha nobani. Kunenqwaba yezibonelo, sicabanga ukuthi lokhu akuzona izindaba, lapho izivakashi zithatha izithombe zabanye abantu, kepha kunezithombe eziyizibonelo zezinkanyezi esingazazi kangako. Vele, kunzima ukugqugquzela izenzo zabanye abantu, ukuqonda inhloso yangempela - kithina uqobo lokhu akuchazeki,kodwa-ke, ukudumala komphumela we-foreplay nge-interlocutor enjalo kusobala. Vumelana - ngenkathi sixhumana, besivele sisitholile isivakashi, ngemibala ehlukahlukene njengoba ufuna, ngokususelwa esithombeni semininingwane yomphakathi ... umlingiswa, indlela ... Kuyenyanyeka ukuthola kamuva ukuthi akabukeki umuntu oboniswe esithombeni. Ngicabanga ukuthi kubuhlungu kakhulu ukukhuthazelela iqiniso lokuthi uma ucabanga ngokuhlala ndawonye nomuntu, nganoma yibuphi ubuhlobo obuzuzisayo, uzothola ubulili futhi abuphikisani nobakho! Zama ukucabanga ngesimo somlingiswa oshaqekile, odumazekile wenganekwane yakhe, owafunda ukuthi ngemuva kwezingxoxo ezinde ngosizo lweziteshi zokudlulisa idatha, wazibonela amakhulu emiyalezo kanye nenqwaba yemizwa emihle ... ebona ukuthi wakhe ) ukukhetha kwakungumhlaseli wobulili obuhlukile. Angithandi ukuba sesimweni esinjalo - lokhu kucacile.Vumelana - ngenkathi sixhumana, besivele sisitholile isivakashi, ngemibala ehlukahlukene njengoba ufuna, ngokususelwa esithombeni semininingwane yomphakathi ... umlingiswa, indlela ... Kuyenyanyeka ukuthola kamuva ukuthi akabukeki umuntu oboniswe esithombeni. Ngicabanga ukuthi kubuhlungu kakhulu ukukhuthazelela iqiniso lokuthi uma ucabanga ngokuhlala ndawonye nomuntu, nganoma yibuphi ubuhlobo obuzuzisayo, uzothola ubulili futhi abuphikisani nobakho! Zama ukucabanga ngesimo somlingiswa oshaqekile, odumazekile wenganekwane yakhe, owafunda ukuthi ngemuva kwezingxoxo ezinde ngosizo lweziteshi zokudlulisa idatha, wazibonela amakhulu emiyalezo kanye nenqwaba yemizwa emihle ... ebona ukuthi wakhe ) ukukhetha kwakungumhlaseli wobulili obuhlukile. Angithandi ukuba sesimweni esinjalo - lokhu kucacile.Vumelana - ngenkathi sixhumana, besivele sisitholile isivakashi, ngemibala ehlukahlukene njengoba ufuna, ngokususelwa esithombeni semininingwane yomphakathi ... umlingiswa, indlela ... Kuyenyanyeka ukuthola kamuva ukuthi akabukeki umuntu oboniswe esithombeni. Ngicabanga ukuthi kubuhlungu kakhulu ukukhuthazelela iqiniso lokuthi uma ucabanga ngokuhlala ndawonye nomuntu, nganoma yibuphi ubuhlobo obuzuzisayo, uzothola ubulili futhi abuphikisani nobakho! Zama ukucabanga ngesimo somlingiswa oshaqekile, odumazekile wenganekwane yakhe, owafunda ukuthi ngemuva kwezingxoxo ezinde ngosizo lweziteshi zokudlulisa imininingwane, wazibonela amakhulu emiyalezo kanye nenqwaba yemizwa emihle ... ebona ukuthi ) ukukhetha kwakungumhlaseli wobulili obuhlukile. Angithandi ukuba sesimweni esinjalo - lokhu kucacile.ukuthembela esithombeni semininingwane yomphakathi ... umlingiswa, indlela ... Kunengeka ukuthola kamuva ukuthi akabukeki njengomuntu oboniswe esithombeni. Ngicabanga ukuthi kubuhlungu kakhulu ukukhuthazelela iqiniso lokuthi uma ucabanga ngokuhlala ndawonye nomuntu, nganoma yibuphi ubuhlobo obuzuzisayo, uzothola ubulili futhi abuphikisani nobakho! Zama ukucabanga ngesimo somlingiswa oshaqekile, odumazekile wenganekwane yakhe, owafunda ukuthi ngemuva kwezingxoxo ezinde ngosizo lweziteshi zokudlulisa imininingwane, wazibonela amakhulu emiyalezo kanye nenqwaba yemizwa emihle ... ebona ukuthi ) ukukhetha kwakungumhlaseli wobulili obuhlukile. Angithandi ukuba sesimweni esinjalo - lokhu kucacile.Ukuncika esithombeni semininingwane yomphakathi ... Ngicabanga ukuthi kubuhlungu kakhulu ukukhuthazelela iqiniso lokuthi uma ucabanga ngokuhlala ndawonye nomuntu, nganoma yibuphi ubuhlobo obuzuzisayo, uzothola ubulili futhi abuphikisani nobakho! Zama ukucabanga ngesimo somlingiswa oshaqekile, odumazekile wenganekwane yakhe, owafunda ukuthi ngemuva kwezingxoxo ezinde ngosizo lweziteshi zokudlulisa idatha, wazibonela amakhulu emiyalezo kanye nenqwaba yemizwa emihle ... ebona ukuthi wakhe ) ukukhetha kwakungumhlaseli wobulili obuhlukile. Angithandi ukuba sesimweni esinjalo - lokhu kucacile.Kubuhlungu kakhulu ukubekezelela iqiniso lokuthi uma ucabanga ngokuhlala ndawonye nomuntu, nganoma yibuphi ubuhlobo obuzuzisayo, uzothola ubulili futhi abuphikisani nobakho! Zama ukucabanga ngesimo somlingiswa oshaqekile, odumazekile wenganekwane yakhe, owafunda ukuthi ngemuva kwezingxoxo ezinde ngosizo lweziteshi zokudlulisa imininingwane, wazibonela amakhulu emiyalezo kanye nenqwaba yemizwa emihle ... ebona ukuthi ) ukukhetha kwakungumhlaseli wobulili obuhlukile. Angithandi ukuba sesimweni esinjalo - lokhu kucacile.Kubuhlungu kakhulu ukubekezelela iqiniso lokuthi uma ucabanga ngokuhlala ndawonye nomuntu, nganoma yibuphi ubuhlobo obuzuzisayo, uzothola ubulili futhi abuphikisani nobakho! Zama ukucabanga ngesimo somlingiswa oshaqekile, odumazekile wenganekwane yakhe, owafunda ukuthi ngemuva kwezingxoxo ezinde ngosizo lweziteshi zokudlulisa imininingwane, wazibonela amakhulu emiyalezo kanye nenqwaba yemizwa emihle ... ebona ukuthi ) ukukhetha kwakungumhlaseli wobulili obuhlukile. Angithandi ukuba sesimweni esinjalo - lokhu kucacile.uhlangabezane namakhulu emiyalezo nenqwaba yemizwa emihle ... wabukela ukuthi ukukhetha kwakhe (kwakhe) kwakungumhlaseli wobulili obuhlukile. Angithandi ukuba sesimweni esinjalo - lokhu kucacile.uhlangabezane namakhulu emiyalezo nenqwaba yemizwa emihle ... wabukela ukuthi ukukhetha kwakhe (kwakhe) kwakungumhlaseli wobulili obuhlukile. Angithandi ukuba sesimweni esinjalo - lokhu kucacile.
Ima! Usebenzisa i-Internet Videochat kwezokuxhumana, ungazigwema kalula izikhathi ezinjalo ezingemnandi. Njengakwi-5D - ukuxhumana, ukusungula oxhumana naye, ukujwayela okukhanyayo - kwenzeka endaweni efudumele eseduze neqiniso ngangokunokwenzeka. Ukufana kwangaphandle kuphambi kwakho, ngakho-ke akukho lutho olungafaka nobuchopho obuqeqeshiwe futhi ucabange ngemicimbi emibi. Uziphatha ngokujabula, ngenkathi uzethemba ngokuphelele, uma kungenjalo ngokufana kwangaphandle, bese ngobuqotho bezinhloso zomngane noma omaziyo.
Ingxoxo yevidiyo engahleliwe kanye nomgomo wokuqaliswa kwayo.
Ukuze usebenzise ingxoxo yevidiyo, udinga izinto ezilandelayo:
- okokuqala: ilaptop yomuntu siqu enenethiwekhi (ukuthola ukutholwa kwesithombe okungcono nokuxoxisana ngokuhlanganyela - i-algorithm yamukelwa: "ijubane liphakama, lihle kakhulu");